ဖူးနုသစ်: အုတ်စ်ဟောက်ကျေးရွာ (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၆)
နာလိုဝူး.... နာလိုဝူး........ ဟီး... ဟီး.. (ရီသံဟုတ်ဘူး. ငိုသံ).. သူပဲတွားနေတာပဲ.. ဟော်လန်ဆိုတာ tulip ပန်းလေးတွေ ပွင့်တဲ့နိုင်ငံမှတ်လား.. တွားချင်တယ်... အဟင့်.. ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲပြော.. လာလျှောက်မယ်... မီးက ပေါ်လီ ဂရက်ဂျူရိတ် အာဝါးဒါးပရောဂျက်မှာ merit ရထားတာ.. တီပီမှာ နာမည်ကြီး... ဟီး.. ဟီး.. စတာ.. ဂယ်ဟုတ်ဝူး...
မခင်ဦးမေ - ကျွန်တော်လည်း ဒီအချိန် အဲဒီနေရာကို ပြန်လွမ်းသလိုပဲ။ :) ဟိုမှာတုန်းကတော့ စင်ကာပူပဲ ပြန်လာချင်တယ်။
မဗေဒါ - Tulip ပန်းတော့ မသိဘူး။ Golden Tulip တော့ တရုတ်ကားထဲမှာ တွေ့ဖူးသလိုပဲ။ ကျွန်တော်က အရင်က Automation ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ Software Engineer အနေနဲ့ လုပ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ ခရီးထွက် ရတယ် ဆိုတာ များသောအားဖြင့် Software Engineer ညံ့လို့ပါ။ ဟီးဟီး။ :D
Ma Mon - If I am not wrong, you know me. You only don't know who I am. hehe. :D
now i know u darling. :P